इनास अवार्डमा सहभागिता जनाउन नेपाली टोली नेदरल्याण्डसमा « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
इनास अवार्डमा सहभागिता जनाउन नेपाली टोली नेदरल्याण्डसमा
[dropcap]अ[/dropcap]न्तराष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाजको आयोजनामा २९-३० मार्च २०१४ मा नेदरल्याण्डमा हुन् गईरहेको ‘इनास फिल्म्स अवार्ड’को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजकले जानकारी दिएको छ । १६ देशका कलाकर्मीहरु सहभागी हुने यो अवार्ड कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अन्तराष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज (इनास) अध्यक्ष पुष्प बरुवालले ठुलोपर्दा डटकमलाई जानकारी दिए ।
यो अवार्डमा सहभागिता जनाउनको लागी नेपाल बाट कलाकार निर शाह नायिका निशा अधिकारी सँगै उद्धव पौडेल, सुनिल रावल, राजेश घतानी, चलचित्र विकास बोर्डका प्रशासन अधिकृत अनुपम निरौला लगाएतका नेदरल्याण्डस् पुगिसकेका छन् । युरोपमा रहेका कलाकारहरु मनिष श्रेष्ठ, नरेन्द्र थापा, पार्वती अधिकारी, अजय शेखर प्रधान, ध्रुबदत्त, वर्षा खड्का, सुशील खड्का लगायतका कलाकारहरु पनि उक्त अवार्डमा सहभागी हुँदैछन् ।
हालसम्म धेरै तर्फबाट पाएको साथ र समर्थन तथा बरिष्ठ र नाम चलेका कलाकारहरुको सहभागिता हुने पक्का भएकोले पनि अवार्ड कार्यक्रम भव्य र सभ्य हुने निश्चित भएको आयोजकले बताएको छ । साथै, उक्त अवार्डमा सहभागि हुन हलिउडका दुई हस्ति आउने भएका छन्। हलिउडमा निकै ठुलो योगदान दिदै आएका डा. म्याथेव र डा. मार्ता रोबिकोस्वाको नेदरल्याण्ड आउने भएका हुन्। उनिहरु अवार्ड अगावै आउनेछन्। २९ मार्चमा हुने इनास युरोप क्षेत्रीय मिटिङमा समेत उनिहरु सहभागी हुनेछन्।
त्यस्तै, ब्रिटिश फिल्म मेकर तथा कलाकारहरुले आँफै सहभागी हुने घोषणा गर्दै सबैलाई यो विशाल कार्यक्रममा आउन इङ्ल्यान्डबाट आव्हान समेत गरेका छन्।